Talooyin waa in aad ogaato oo ku saabsan taariikhda Spotify
Boggan inay taariikhda tareenka maqashay oo waxaad wax dareen ah oo kala duwan oo dhan wada. Iyo dhagaysto kuwa kuwan raadkaygay waa kuwa aad ugu cadcad yahay madadaalo. Ka soo qaad in aad si track ah dhegaysiga iyo aad u rabto aad u badan, laakiin ma xasuusto magaca wadada, ama ma awoodi doonaan in ay la xasuusto muddo dheer. Maxaa la sameeyaa, sida aad ku haysan karto rikoor ah kuwan raadkaygay kuwa ??
Hadda xal u ah taasi waa shaqada taariikhda. Waa wax fikrad ah oo muhiim u ah adeeg kasta. Sida aad ula socon karto record ee taariikhda dhirta aad ku siiyaa biraawsarkaaga, aad loo raad raaco karaa diiwaanka music aad.
Laakiin, sida aad ka heli kartaa taariikhda ku Spotify, waxaa jira hab fudud oo aad samaysaan waxa ku. Just raac tallaabooyinka iyo aad u fudud raaci kartaa taariikhda iyo dar tareenka in aad playlist.
1. meeh feature taariikhda
2. Sida loo ciyaaro kuwan raadkaygay taariikhda Spotify? / A>
3. Sida aad nadiifin kartaa taariikhda?
Feature taariikhda waa si toos ah loo heli karo dadka isticmaala desktop iyo si fudud loo heli karaa inta u Android iyo macruufka users waa war xun, sababtoo ah ay heli karo si toos ah, laakiin lala xiriirinayay xisaabtaada Last.fm ama Facebook. Oo sidaas waa inay helaan taariikhda loo maqli karo aad ayaa looga baahan yahay si ay u tagaan qaybta xisaabta, waxaa aad ka heli karto doorasho taariikhda. In kastoo taariikhda si toos ah u heli karaa gmail, waxay ahayd dhowr bilood ka hor. Laakiin la updates ugu dambeeyey, in laga saaray oo loo tixgeliyo cillad ah update ah. Hadda si aad u aragto taariikhda ku desktops aad,
: In dhinaca midig ee shaashada caawi- maadda aad tilmaamaha mouse, oo aad ka heli doono safka menu (for version ugu dambeeyay Si bidix ee qoraalkii ka weyn.). Riix icon ah.
: Waxaad ka arki kartaa doorasho taariikhda ee liiska ah.
: Riix qaybta iyo taariikhda ku shuban doonaa. Hadda waxaad maqli karo in ay heeso iyo sidoo kale iyagoo aad ku dartid aad playlist si looga fogaado dhibaato oo dhan tan.
waxaad ka raadin kartaa iyo dhirta taariikhda kaliya ee fadhiga firfircoon. Dhammaan kuwan raadkaygay ku ciyaaray kaliya in loo arki karaa in diiwaanka. Marka aad baxdo codsiga Spotify ah, xogta khasnado ku qabowjiyaa rikoorka oo sidaas darteed ma jiro taariikhda ee kalfadhi oo hore laga heli karaa si aad u helaan.
haddii dadka isticmaala telefoonka doonayso inaad hesho diiwaanka music, waxa ay u samayn kartaa adigoo heli xisaabta ku saabsan PC taasi ka dhigi lahaa isticmaalka safka iyo menu taariikhda la heli karo si loogu isticmaalo waxaana laga yaabaa in aad habraaca ku xusan sii wado.
2. Sidee u ciyaaro kuwan raadkaygay taariikhda Spotify?
Si fudud u helaan qaybta taariikhda Spotify dooro wadada aad rabto inuu u ciyaaro.
Track wuxuu bilaabi doonaa ciyaaro. Haddii track waa aad jeceshahay, ama aad rabto in lagu badbaadiyo ama waxa ay sii kordhineysaa in aad playlist, dooro 'daro in playlist' icon iyo dar wadada si aad playlist xushay.
Waxa kale oo aad dooran kartaa kuwan raadkaygay badan oo ay u sameeyaan playlist cusub oo ugu cadcad kuwan. Tani playlist cusub la badbaadin karaa oo aad ku raaxaysan karaan kuwa oo dhan kuwan raadkaygay in waad isku Khilaafi lahaydeen haddii shaqo taariikhda ayaa ka maqnaa doono.
Fadlan la soco in taariikhda ciyaarta laga heli karaa Kalfadhiyo firfircoon oo kaliya. Waxaad aan raad karaa diiwaanka track hore.
Mararka waxaa dhici lahaa in aad la ciyaareyso track ah, laakiin ma jeclaan, si aad u bedesho music ah. Laakiin taariikhda Spotify diiwaan gelinayaa diiwaanka music ciyaaray oo dhan, sidaas inkastoo aad bedelay track, maxaa yeelay, aad ha jeclaan, waxa ay ku sugan taariikh u noqon doonaa. Hadda marka aad rogto doonaa taariikhda in ay dhex maraan si xawli caadi ciyaaray, taas oo sidoo kale diyaar u noqon doona. Ma jeclaan lahayd inaad ka saarto wadada ka taariikhda ??
Ma jiro feature ama doorasho lagu heli karaa Spotify si meesha looga saaro tareenka ka taariikhda la heli karo, laakiin sida kaliya ee lagu ogaa in ay nadiifiso taariikhda si loo soo afjaro fadhiga firfircoon iyo guuleysatey codsiga. Tani cadda lahaa al diiwaanka hore, laakiin sidoo kale waxaa laga yaabaa in aad khasaaraha diiwaanka heesaha jeclaan laga yaabaa in ee taariikhda.
> Resource > Spotify > Talooyin aad ka ogaato ku saabsan Spotify Taariikhda